Kajy ny Gable-tampon-trano tafo
Kajy ny tafo fitaovana ho Gable tafo
Mamaritra ny refin'ny ny tampon-trano
X2 - sakan'ny ilany ny tampon-trano akaikin'ny rindrina!
Teo anelanelan'ny ny zana-kazo lathing R
Kajy ny Gable tafo
Y2 - fanampiny avo
X2 - fanampiny sakany
Ny fandaharana dia natao mba kajy tafo fitaovam-: isa FANAOVANA TAKELABY (ondulin, Nulin, bato na vy), underlay fitaovana (tara, tafo fitaovana), ny isan'ny zana-kazo sy ny peta-drindrintsika lathing.
Azonao atao ihany koa ny kajy ilaina amin'izany dia endriky ny tampon-trano.
Ny fandaharam-miasa ao fisian'ireo fomba roa: Gable tsotra tafo sy ny tampon-trano amin'ny lafiny roa Tapenaka (lafiny tafo), nitendry 1 sy nitendry 2.
Fampitandremana! Raha manana tafo amin'ny lafiny Gable iray, dia ampiasaina mba manao kajy ny voalohany karazana 1, dia nitendry 2. Ary avy amin'ny rakitra ny kajy ny habetsaky ny fitaovana: trusses, purlins hazo fisaka, underlay sy taratasy fitaovana.
Raha tsy izany, ny kajy dia mety ho fahadisoana. Raha ny marina, dia mamela ny fandaharana ho an'ny fampihenana any amin'ny lehibe tafo ambanin'ny lafiny Tapenaka-tampon-trano.
Ao ny kajy dia mahita isa: ny habeny na ny boky ny fitaovana fanorenana antsasaky ny tampon-trano, ary tao fononteny mahitsizoro - feno habeny na ny boky.
Amin'ny calculating fanampiny tafo - feno habe sy ny votoatiny, ary nanao ny fononteny mahitsy roa amin'ny isa: ny habeny sy ny boky iray sy roa fanampiny tafo.
Fampitandremana! Rehefa calculating ny ravin-tafo fitaovana, ao an-tsaina foana fa ny fandaharana tora-droa mahita ny tafo.
Ohatra, ny 7,7 nampitombo 2,8 andiana fanitso amin'ny laharana. Rehefa nametraka ny tena fanorenana 3 andalana.
Fa kajy marina kokoa ny isan'ny fanitso ny tafo mba hampihena ny haavon'ny ilainareo isan-taratasy mandra-nanisana andian.
Aza adino ny mametraka ny habetsahan'ny hifanindry marimarina kokoa.
Rehefa calculating ny boky ny fitaovana ny peta-drindrintsika-tampon-trano lehibe, teo ambany fitondrana ny karazany 2, ny fandaharana dia tsy ahitana lafiny nanapaka-avy Gable. Izany dia noho ny olana sasany amin'ny fampiharana ny fandaharana.
Angamba hanapa-kevitra aho amin'ny ho avy.
Na izany aza, ny ara-nofo be loatra ny peta-drindrintsika dia inoana ho levona na ny hiezahanao ny kajikajy.
Hisy ihany koa ny fandaharam-misaraka ho an'ny manan-tsaina kokoa ny tafo taratasy kajy fitaovana.
Ary aza adino ny hividy fitaovam-panorenana dia tsy maintsy ho amin'ny sisiny ny fandaniam-poana ny sasany.